फुड पाेइजन के हाे ? कसरी हुन्छ र यसकाे समाधान के हाे ? जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
हाम्रो नियमित खानामा पनि रोगका जीवाणुहरू वृद्धि हुन्छन् । ती जीवाणु र तिनले उत्पादन गरेका विभिन्न रसायनले झाडापखाला लगाउने, बान्ता गराउने, पेट दुखाउने तथा खानाको विषाक्तता गराउँछ ।
खानाको विषाक्तता ब्याक्टेरिया, भाइरस परजीवी र विषादीका संक्रमणले गर्दा हुन्छ । ब्याक्टेरियाको प्रवेश खानेकुरामा निम्न कारणले गर्दा हुन्छ ।
फुड पाेइजन विभिन्न ब्याक्टेरिया तथा भाइरसका साथै त्यसबाट उत्पन्न भएका विषबाट हुने गर्छ । फुड पाेइजनका जिवाणुहरु नोरो भाइरस, सालमोनेला,कम्पेलोब्याक्टर, इकोलाई टोक्सोप्लाज्मा गोडी आदि हुन् ।
फुड पोइजनिङ भएको थाहा भएमा बिरामीलाई जतिसक्दो चाँडो स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य संस्था पुग्नु अघिसम्म यदि बिरामीले पिउन सक्छ वा बान्ता भएको छैन भने जीवनजल दिन पनि सकिन्छ । स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल पुगेपछि जीवाणु पत्ता लगाएर त्यसै अनुरूप एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने समयमा उपचार नभए जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने डर रहन्छ ।
कडा जलवियोजन र इकोलाइका केही प्रजातिले गराउने हेमोलाइटिक युरेमिक सिन्ड्रोमको समयमै उपचार नभएमा बिरामीको मृत्युसम्म पनि हुन सक्ने डर रहन्छ । यसकाे जाखिम वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती महिला तथा दीर्घरोगीमा अझ बढी हुने गर्छ ।
प्रायजसो खानाको विषाक्तता दुई दिनपछि आफैँ निको हुने गर्दछ । उपचारको मुख्य उद्देश्य शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन नदिनु हो ।
दिसा हुन्जेल ठोस खानेकुराहरू नखाने, दुग्ध पदार्थहरूबाहेक अन्य तरल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा खाने, बच्चाहरूलाई जीवनजल खुवाउने, यदि विषादी खानेकुराहरू (च्याउ/माछा) खाइएको छ भने तुरुन्त चिकित्सालाई देखाउनुपर्दछ ।
उनीहरुले रुचाउने बजारिया खानेकुराहरु यदि घरमै बनाउन सम्भव छ भने त्यो प्रयास गर्नुहोस । घरमै बर्गर र पिज्जा बनाउनुस र तिनीहरुमा बढिभन्दा बढि हरियो सागपात समावेश गर्नुहोस ।
स्कुलका टिफिन बक्समा हरेक दिन बच्चाहरुलाई केही नयाँ कुरा राखिदिनुहोस । तर, ती चिजहरु पोषक तत्वबाट भरिपूर्ण हुनुपर्छ ।
घरमा यस्ता खानेकुराहरु राख्ने गर्नुहोस जुन स्वादिष्ट हुनुका साथै स्वाथ्यलाई पनि लाभदायक होस जंक फुड सकभर घरमा राख्दै नराख्नुहोस् ।
बच्चालाई सबै परिवारसँगै बसेर खाना खान दिनुहोस। बच्चाले जे कुरा खानलाई आनाकानी गर्छन्, त्यो उनीहरुकै अगाडि आफूले खाएर देखाउनुपर्छ ।
छाला धेरै पोषण तत्वको कमी अथवा बढिको पहिलो सूचक पनि हो । जस्तै भिटामीन ‘ए’ को कमीले गर्दा कपाल र छालामा समस्या देखा पर्न सक्छन् । भिटामिन ‘बी’ को कमीले मुखमा खटिरा र घाउ आउन सक्छ ।
भिटामिन ‘सी’ को कमीले स्करभी र घाउ निको नहुन सक्छ भने भिटामिन ‘डी’ को कमीले छालाको टिबीलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । क्याल्सियमको मात्रा धेरै भए पिम्पल र खटिरासँग हुन्छ भने म्यागनिसियमको मात्रा थोरै भए मुसा र अन्य खटिरा देखा पर्छन् ।
यस्ता समस्या भए धेरै तरकारी खानुपर्छ ।
क्यान्सर रोगीलाई सचेतपूर्वक पोषणको सल्लाहको खाँचो हुन्छ । क्यान्सरले शारीरिक कोषबाट निकै पोषण तत्व घटाउने भएकोले रोगीमा मानसिक, पाचन क्रियामा र अन्य शारीरिक समस्या देखा पर्न सक्छन् । त्यसैले खानेकुराको सन्तुलन मिलाउन सके बिरामीलाई हानीबाट बचाउन सकिन्छ ।
क्यान्सरपीडितले दिनमा प्रोटिनजन्य वस्तु जस्तै मासु, माछा, अण्डा, दूध र दाल ५० ग्राम भन्दा माथि खानुपर्छ । बिरामीले फलफूल र तरकारीको मात्रा उचित मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ । खानाले संक्रमण समस्या आउने भएकोले धेरै दुध, दही सेवन नगर्दा उचित हुन्छ।
ग्रीन टि एन्टिअक्सिडेन्टको सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो । पेट सफा राख्न, रगतको शुद्धिकरणका लागि समेत ग्रीन टि उपयोगी हुन्छ । ग्रीन टिमा यस्तो तत्व हुन्छ, जसले शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ ।
यो छाला, केस, हड्डी स्वस्थ्य राख्न प्रभावकारी मानिन्छ । ग्रीन टिमा एन्टि क्यान्सर गुण समेत हुने अध्ययनहरुबाट थाहा भएको छ ।
धेरैले बेसारलाई सामान्य मसालको रुपमा लिन्छन्, जसले सब्जीको रंग र स्वादमा प्रभाव पार्छ । यद्यपी बेसार मसला मात्र होइन, यो उत्तिकै औषधिय गुणले भरिपूर्ण छ । बेसारले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ ।
शरीरको दुखाई कम गर्न पनि यो उपयोगी हुन्छ । केस, छालाको सौन्दर्य निखार्न समेत बेसारको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
दालचिनी धेरै परिकारको स्वाद बढाउन प्रयोग गरिन्छ । यसको सेवनले स्वाद मात्र बढ्दैन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ ।
यसको सेवनले ब्लड शुगर लेभल नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । त्यसैले खानामा दालचिनीको प्रयोग लाभदायक हुन्छ ।
लसुन, जो दिनहुँ भान्सामा प्रयोग हुन्छ । यसलाई पकाएर वा काँचो खान सकिन्छ । लसुनमा भिटामिन बि-६, भिटामिन-सि, आइरन र फस्फोरस जस्ता तत्व पाइन्छ ।
यसमा एन्टि फंगल र एन्टि ब्याक्टेरियल गुण पनि पाइन्छ । लसुनको सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।
प्राकृतिले हाम्रो शरीरको आवश्यक्ता अनुसार फलहरु दिएका छन् । जुन मौसममा, शरीरलाई जस्तो पोषण तत्व आवश्यक हुन्छ । त्यही अनुसार फलहरु प्राप्त हुन्छ ।
त्यसैले मौसम अनुसार फल सेवन गर्नुपर्छ । फलले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ ।
केशरयुक्त दुधको सेवनले शरीरमा ताकत मिल्छ । यसले छाला, केस, आँखामा राम्रो प्रभाव पार्छ । साथसाथै केसरयुक्त दुधको सेवन यौन दुर्बलतामा पनि फाइदाजनक मानिन्छ ।
गर्भवतीले केसर मिश्रति दुध पिउनु राम्रो हो । यसले आमा र गर्भको बच्चा दुबैलाई फाइदा गर्छ ।
नीमको पात सहजै उपलब्ध हुन्छ । त्यसो त नीमको पातदेखि बिज, बोक्रा सबै स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । दाँतको सफाईमा नीमको दातुन उत्कृष्ट बिकल्प हो ।
हुन त नीमको पात सोझै सेवन गर्दा धेरै तीतो हुनसक्छ । त्यसलाई पिसेर गोली बनाउने । अतः नियमित रुपमा खाली पेटमा सेवन गर्नुपर्छ ।
अदुवा, भान्सामा सजिलै पाइन्छ । यसले तरकारीको स्वाद त बढाउँछ नै, स्वस्थ्यका लागि फाइदाजनक पनि हुन्छ । खासगरी चिसोले सताएको छ भने अदुवाको चिया बनाएर पिउनुपर्छ ।
बाह्य चोट पटकमा समेत औषधीको काम गर्छ यसले । केस र्झनबाट रोक्न, केस उमार्न अदुवाको रस उपयोगी हुन्छ ।
तुलसी त आर्युवेदमा अति महत्वपूर्ण वनस्पती मानिन्छ । यसलाई हामी घर आँगनमा रोपेर पूज्ने पनि गर्छौ । वास्तवमा तुलसी बहुगुणी वनस्पती हो । दैनिक ५-७ वटा तुलसीको पात खानाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ ।
चिसो वा रुँघामा तुलसीको चिया बनाएर सेवन गर्नुपर्छ, फाइदा गर्छ ।
दहीमा यस्तो सुष्म ब्याक्टेरिया पाइन्छ, जो पाचन यन्त्रका लागि अति फाइदाजनक मानिन्छ । दहीको सेवनले पेट सम्बन्धी रोगबाट छुटकारा मिल्छ ।
यद्यपी दही बिहान वा मध्यन्हको खानामा मात्र सेवन गर्नुपर्छ । राती दही सेवन गर्नु हानिकारक मानिन्छ ।
याे भिडियाे पनि हेर्नुहाेला ।
Topics #कस्ता लक्षणहरु देखापर्छ #किन हुन्छ फुड पोइजनिङ #फुड पाेइजनकाे लक्षण #फुड पोइजनिङको उपचार के त
Don't Miss it भुलेर पनि तुलसीको पातलाई कहिलै पनि यसरी प्रयोग नगर्नुहोस्
Up Next नुहाएपछि छाला फुस्रो हुने समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्